MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardService Guide Book Lucky Pack Promotion MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Data Carry Pack ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
DataCarryPackသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက်ဒေတာအသုံးပြုနိုင်သောPackageများဖြစ်ပြီးပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့်သက်တမ်းကိုပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Data Carry Pack ဝယ်ယူတိုင်း 200 GB အထိ ကံထူးခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။
699 Ks 415 MB Data Carry ဝယ်ယူတိုင်း 200GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး! ၃၀ ရက်
999 Ks 1000 MB *777*2# or *777*3#
1399 Ks 1400 MB *777*4#
1999 Ks 2000 MB *777*5#
2999 Ks 3000 MB *777*6#
4999 Ks 5000 MB *777*7#
9,999 Ks 10000 MB *777*8#
19,999 Ks 20000 MB *777*9#
29,999 Ks 30000 MB *777*0#
သောကြာနေ့မှာ Data Carry Pack ဝယ်ယူပါက ကံစမ်းခွင့်ရရှိမှာပါလား ?
သောကြာနေ့တွင် Data Carry ဝယ်ယူပါက Happy Friday အပိုဆောင်း ဒေတာ (MBs) များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Data Carry Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ပေါင်းစည်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Data Carry Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်) အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ် တစ်ခုဝယ်လျှင်အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Data Carry Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ။
Data Carry Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?